Teknụzụ na-atụ aro iji nye na inepo Day | Akụkọ akụrụngwa
Paco L Gutierrez | | Amazon, Ngwa, General
Na-eru nso Hɔ, ụbọchị nke masịrị anyị ma ọ bụ na-adịghị egosi na kalenda maka ndị niile nwere onye ọlụlụ ma chọọ ịchọ onyinye. Ihe a na-ahụkarị ga-enye ụfọdụ ifuru ma ọ bụ ụfọdụ chọkọletị, mana Ọ bụrụ na ị na-amasị technology, ị na-n'ezie na-eche nke na-enye a ọzọ mbụ onyinye ka onye gị. O doro anya na e nwere ọtụtụ ngwaọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ga-eme ka ị nwee obi ụtọ ma ọ bụ chọọ ha ma enweghị ha.
E nwere ọtụtụ iche iche nke ngwaahịa eletrọniki, maka mmefu ego na mkpa niile, ma lee, anyị ga-ahụ ma jiri ọtụtụ n'ime ha kpọrọ ihe nke anyị nwere ike inye dị ka onyinye nye onye anyị, anyị nwere ike iso ya rie nri abalị ma ọ bụ ụfọdụ okooko osisi n'ezie, mana n'ezie ọ bụrụ na ị nweta ya nke ọma ị ga-echeta ụbọchị ahụ ruo ogologo oge, ebe ọ bụ na teknụzụ abụrụla akụkụ nke ndụ anyị. Ebe m na-ahapụ m nwere ikwu si kasị elu na kasị ala price nke onyinye maka inepo Day.
1 Smartphone nke ị ga - achọ:
1.6 Xiaomi Redmi Rịba ama 8
2 Anyị na-enwe ekele mgbe niile maka uwe:
2.7 Xiaomi Ikuku
3 Ngwa na ngwa:
3.3 Gbasara akwukwo Paperwhite
4 Smart Ọkà okwu Bilie
4.1 Ihe ntaneti nke Amazon gosiri 5
4.2 3-in-1 caji ebe
4.3 NIX Advance digital foto etiti
4.4 Sonos Otu uzo
Smartphone nke ị ga - achọ:
O doro anya na ama ama ihe omuma banyere ihe omuma banyere ihe omuma, anyị niile chọrọ ya ma anyị na-ebu ya awa 24 kwa ụbọchịEnwere ụdị dị iche iche dị iche iche, ọ na - esiwanye ike ịhọrọ ihe ga - akachasị mma maka anyị n'etiti ọtụtụ nhọrọ, ebe a anyị ga - ahụ ndị kachasị atụ aro site na ndị kachasị ọnụ ahịa maka ndị dị ọnụ ala maka ụbọchị Valentine a.
N'afọ a, Apple juru anyị anya site na ịmepụta ọnụ na-apụ apụ maka inwe ọnụahịa mma dị ezigbo mma, ọ bụghị ọnụ ala na ọ bụghị nke kachasị ọnụ mana ọ pụtara ìhè n'ọtụtụ ihe. Nhazi kachasị ike na anyị nwere ike ịchọta na Smartphone, igwefoto dị elu nwere ike iwe foto dị egwu na nnwere onwe na-enweghị ngwụcha. Echere m na ọ bụ nhọrọ kachasị atụ aro ma ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ iPhone.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon na 64gb ya, 128gb na 256gb nke ya. Ọnụ ya ugbu a na-amalite na € 809.
Ọnụ kacha mma na mmekọrita ọnụahịa mma na Samsung nwere na katalọgụ sara mbara ya doro anya na Nkọwa 10 a, ebe ọ bụ na ọ na-ekenye nwanne ya nwoke okenye ọtụtụ nkọwa. awade a ukwuu ejide size na a ọtụtụ ndị ọzọ gbanwee price. Anyị nwere ya n'ụdị dịgasị iche iche, ọ ga-emerịrị ka ọ bụrụ onyinye n'ihi na ọ bụ teknụzụ kachasị mma sitere n'aka onye Korea.
Ebe anyị nwere ike ịhụ ya na-enye na Amazon na mbipute 256gb ya. Ọnụ ego ọ dị ugbu a bụ € 705.
OnePlus bụ onye ama ama maka inye onyinye ngwaọrụ ndị dị elu nke "kachasị" na ọnụahịa ka mma, Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọnụego ọnụahịa a belatara oge ka OnePlus nọ na-etinye ihe ndị ka mma na teknụzụ ka mma na njedebe ya, ruo n'ókè nke na ọ ghọọla akara maka ndị hụrụ ya n'anya Android na ụdị ya dị ọcha. 90-anụ ọhịa Amoled 6,55Hz ngosi, Snapdragon kasị ike processor na otu ese foto nke ga-atọ ụtọ ihe osise kachasị mma nke foto.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon na mbipute 128gb ya. Ọnụ ego ọ dị ugbu a bụ € 617.
O yiri ka LG Ọ gbadata ntakịrị ọgụ na mpaghara telephony mana afọ gara aga ọ tụrụ anyị n'anya na ndị G8s, njedebe dị elu nke na-enweta ngwaike kachasị mma na ọnụahịa mkpofu. Ọ bụ ọdụ dị ebube nke ejiri ọla na iko mee, yana igwefoto ihe mgbaze, a nnukwu oled ihuenyo mere LG na olee otú o nwere ike ịbụ n'ụzọ ọzọ a ngalaba ụda ebe ọ pụtara karịa asọmpi niile.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon na mbipute 128gb ya. Ọnụ ego ọ dị ugbu a bụ € 425.
A na-ahụ Huawei mgbe niile na-enye ọmarịcha mma na ngwaahịa ya niile ma enwere ekele na ọ na-eme ya mgbe niile karịa ọnụego a gbanwere, na nke a, anyị na-ekwu maka nwanne nwanne Huawei p30 mana ọ bụghị maka nke ahụ dị obere. Njikwa ihuenyo niile nwere nhazi adịchaghị, tinyere otu nnukwu 6,15 inch ihuenyo na 4 ese foto nke ahụ ga - eme gị ịse foto kacha mma n’ọnọdụ ọ bụla. Na Mgbakọ zuru ụwa ọnụ, ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ọnụahịa ya nwere ike igosipụta, ìhè, nkasi obi iji aka, yana a ezi ihu na NFC. Ọnụ ọgụgụ a dị egwu nwere ọrụ Google niile.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon. Ọnụ ego ọ dị ugbu a belatara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ € 150, nke bụ € 205
Xiaomi Redmi Rịba ama 8
Xiaomi echefughi na ndepụta nke akwadoro ya wee nweta ya na uru ya kemgbe ọ ghọrọ ika dị mma kachasị mma ma ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ abụghị ka anyị mebie akaụntụ ụlọ akụ anyị. N'ihi ọnụahịa ya, ọ nwere ike ịdị ka ọ bụ njedebe dị ala, mana ọ bụ ọdụ dị n'etiti etiti nwere ike ịrụ ọrụ ọ bụla n'enweghị nsogbu ọ bụla, ọbụlagodi igwu egwuregwu kachasị ugbu a na batrị ahụ bụ ọ joyụ. Gaghị enwe arụmọrụ kacha mma ma ọ bụ foto kacha mma mana n'ezie o zuru ezu ma ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ na-achọsi ike.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon na mbipute 64gb ya. Ọnụ ego ọ dị ugbu a bụ € 167.
Anyị na-enwe ekele mgbe niile maka uwe:
N'ihi na ndị na-amaghị wearable technology na-ezo aka ihe eji eme ihe kwa ụbọchị nke anyị na-eburu anyị mgbe niile nwere microprocessor webatara. Anyị nwere ike ibi na enweghị ha mana ha na-enyere anyị aka imeziwanye kwa ụbọchị ma ikekwe ọtụtụ n'ime ha ghọrọ ihe ọ bụla dị mkpa dị ka smartphone. N'ebe a, anyị ga-ahụ ihe ndị kachasị atụ aro site na nke kachasị ọnụ na nke kachasị akụnụba.
Apple na-achị na ụfọdụ teknụzụ na otu n'ime ha bụ Smartwatch, ihe nlere a abụghị nke kachasị ugbu a ma ọ bụ nke nwere ọtụtụ nhọrọ, mana ọ bụ elekere amamịghe nke na-ejikọ teknụzụ niile anyị chọrọ kwa ụbọchị. ndabere, na ndị kasị mma ewu na-ahụkarị mechie apple apụl. Anyị ga-enwe nguzogide mmiri, GPS agwakọtara na ebe nchekwa dị n’ime iji chekwaa egwu anyị ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịpụ na-eme egwuregwu na-enweghị iPhone on. Ọ bụ naanị dakọtara na iPhone.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon na ụdị 38mm GPS ya. ego ya ugbu a bụ € 229.
Mgbe nyochaa ha ebe a na omimi, anyị nwere ike n’ike ịsị na ekweisi ndị a sitere na Kygo dị ebube banyere nke kacha mma n'elu-ntị ịkagbu ekweisi mkpọtụ ahịa. Ọ bụ ihe gbasara a Ngwaahịa adịchaghị na ihe ndị kasị connoisseurs nke ụda na music ga-enwe, ebe ọ bụ na ha nwere a nke nkagbu kacha mma na anyị nwere ike ịchọta taa n'ahịa, ahazi ngwa ngwa yana ọtụtụ nhọrọ nha anya, niile na-esonyere nnwere onwe dị egwu. Ikekwe ihe owuwu ụlọ abụghị ihe kachasị dị ịtụnanya mana ha dị oke oke ujo ma ọ bụ dobe na-eguzogide ọgwụEbe ọ bụ na echiche nke ekweisi ikuku bụ inwe ike iwere ha ebe ọ bụla n'atụghị ụjọ na ha nwere ike njọ.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ha n'ime Amazon. Ọnụ ego ọ dị ugbu a bụ € 249.
Mgbe nyochachara ma nyochaa ha Lee anyị nwere ike ikwu na Huawei kụrụ na tebụl oge a na - ewepụta ekweisi kacha mma TWS enwere ike ịchọta n’ahịa na-erughị € 200. Ha adịghị ọnụ ala mana ogo ha na-eme ka ọnụ ahịa ha pụta, nwere mkpọtụ mkpọtụ nọ n'ọrụ, ya mere na anyị na ha anyị ga-amata nmikpu nke ọdịnaya audit anyị na-anụ ụtọ. Ha na-enye a mmekorita zuru oke na ihe ndi ozo nke Huawei ma ha na-n'ụzọ zuru ezu dakọtara na ihe ọ bụla Bluetooth ngwaọrụ, ha nwere a mara mma imewe na wuru na elu àgwà ihe, a ọchịchị kacha mma na ikuku na-akwụ ụgwọ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iji nwee ha oge niile. Ha nọ ugbu a na nkwalite gụnyere chaja ikuku maka ịzụrụ.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ha n'ime Amazon. Ha ugbu a price bụ € 179 na ha na-agụnye a free wireless chaja.
Ezigbo ekweisi ikuku ndị a sitere na Apple n'adịghị ka smart smart na-eme dakọtara na ngwaọrụ Bluetooth niile n'agbanyeghị onye nrụpụta ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ. Ọ na-enye ezigbo omume enyi na ntị ọ bụla ma ọ dịghị mkpa ịtinye ha n'ime oghere anya ka ọ na-eme n'ọtụtụ asọmpi ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Apple ị ga-enwe ụfọdụ elele dị ka jikọta na njirimara gị nke ga-arụ ọrụ na ngwaọrụ gị niile na akpaghị aka. A pụrụ ịdabere na ya maka ọdịdị ụda ha na karịsịa maka ọrụ ha na-arụ ọrụ, na-enweghị njikọta na-enweghị isi.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ha n'ime Amazon na ya version na-enweghị wireless Nchaji. Ọnụ ya ugbu a bụ € 139.
The smartwatch nke ọgbọ ikpeazụ China ibu bụ otu n'ime ihe ndị mara mma nche na ahịa, ọ pụtara ìhè maka nnwere onwe dị mma na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ọrụ egwuregwu. Ọ nwere ezigbo njikwa nke ofma Ọkwa nke ga-azọpụta anyị n'ọtụtụ oge iru ekwentị anyị na nke kachasị mma N'adịghị ka ụdị Apple, nke a dakọtara na ndị nrụpụta niile, ọbụlagodi iPhone n'onwe ya.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon na ụdị ejiji ya. a na-enye ego ya ugbu a na € 99.
Ọ bụ ihe ọnụ ala smartwatch si Xiaomi, ma ọ dịghị ihe na-erughị eru, ebe ọ bụ na ọ nwere ihe mmetụta niile iji chịkwaa ọrụ ahụ anyị maka ọzụzụ anyị, ọ nwekwara njikwa ngosi, mana enweghị ike ịza ndị a, anyị ga-enwe ike ịhụ onye na-akpọ anyị mana naanị anyị ga-ahapụ anyị ịjụ kpọọ. Ọ bụ a mmachi ngwaọrụ ma nke a nwere ya uru, ebe anyị ga-enwe a obodo kwụụrụ onwe ya ihe dị ka ụbọchị iri atọ na ise nke iji kwụsị ọrụ, anyị nwere ike iso ya hie ụra iji chịkwaa ụra anyị. Ihuenyo ya nwere ihe dị iche na ọ bụ na ọ bụ nkà na ụzụ nke na-eme ka ìhè dịkwuo mma karịa ka ọ dị, yabụ ọ ga-enyere anyị aka ịhụ ya nke ọma na ìhè anyanwụ na-enwu gbaa, n'adịghị ka asọmpi ahụ.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon naanị na ụdị ya. Ọnụ ego ọ dị ugbu a bụ € 59.
Emebere ekweisi Xiaomi site na mma iji rịọ n'ahịa anyị mana ha na-ere n'ikpeazụ, anyị nwere ekele na ọ bụ ngwaahịa a tụrụ aro, nwere njikwa njikwa ma dakọtara na ngwaọrụ ọ bụla, anyị nwedịrị ike ịmalite enyemaka google. Ha anaghị eru ogo nke Airpods ma ọ bụ Galaxy Buds, mana ha gosipụtara ya na ọnụ ahịa dị oke ọnụ nke na-eme ha onyinye mara mma nke ukwuu ebe ha nwere ọmarịcha mma mara mma nke onye ọrụ ọ bụla chọrọ ige ntị. egwu na-enweghị wires.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ha n'ime Amazon. Ọnụ ego ọ dị ugbu a bụ € 40.
Ngwa na ngwa:
O doro anya na ọtụtụ Tocho anyị hụwororịrị mana onye anyị na ya nwere ike ịnwe ngwaọrụ ndị ahụ anyị kpọtụrụla na ihe ha chọrọ bụ ihe ọzọ, lee, anyị ga-ahụ usoro ngwaọrụ ndị ha nwere ike ịmasị wee bụrụ ihe kwa ụbọchị.
Ezé eze a nke ugbua anyị nyochaa ebe aỌbụghị sọọsọ ezé eletrik, ọ bụ brush tozuru etozu. N'ezie otu nke ntacha eze kacha mma anyị nwere ike ịzụta taa, n'ihi ihe dịgasị iche iche gụnyere njikọ anyị iOS ma ọ bụ gam akporo ama, nke a na-enye anyị ọtụtụ ozi gbasara nchacha anyị wee si otú ahụ mee ka ọnụ anyị dị ọcha dịka o kwere mee ebe ọ bụ na ahịhịa a ọ ga-adịgide adịgide-agwa gị site gị ama. Ya Premium imewe ga-ahapụ onye ọ bụla na-enweghị mmasị, na ya fanye batrị na-enye anyị nnwere onwe dị mma. Ọ bụ ngwaahịa anyị na-eji kwa ụbọchị ma anyị nwere ekele maka mgbakwunye a.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon. Ya ugbu a price bụ na-enye maka 173 XNUMX
Mbadamba mbadamba nkume nke kachasị mma / ọnụego dị na ahịa, yana a 10 inch ihuenyo ọ ga-adị mma maka nchọgharị, lee usoro na Netflix ma ọ bụ kpọọ egwuregwu, enwere mpempe akwụkwọ dị ike karịa mana echere m na nke a karịrị ezuru iji nwee ọ contentụ na ọdịnaya niile multimedia ma ọ bụ kpọọ egwuregwu ndị kachasị ewu ewu. Ọ incorporates a micro processor arụpụtara site Huawei na 2gb ebule na sistemụ gị bụ android, yabụ anyị ga-enwe ngwa niile dị na Google Play.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon. Ọnụ ya ugbu a bụ € 139
E-akwukwo Amazon bu ngwaahịa dị oke mkpa maka ndị na-agụ akwụkwọ, ebe ọ bụ na anyị na-enye gị ohere iburu ọkacha mmasị gị niile n'otu ngwaọrụ ahụ. Ngwaọrụ a adịghị ka smartphones ma ọ bụ mbadamba anaghị ebute ìhè na-acha anụnụ anụnụ n'ihi ya, anyị na-ezere ike ọgwụgwụ anya na ụra nkwụsị mgbe ị na-agụ ihe na ihuenyo gị. ugbu a, enwere ike idozi ya n'ihu, ya mere ị nwere ike ịgụ ebe ọ bụla na mgbe ọ bụla ịchọrọ. Ezubere gị Kindle maka ịgụ ma nwee mmetụ dị iche dị iche na - agụ dị ka akwụkwọ ebipụtara. enweghị echiche ọ bụla, ọbụlagodi na ìhè anyanwụ. Otu ụgwọ nwere ike inye anyị otu izu ike y Ọ bụrụ na ị bụ onye bụ isi ahịa nke Amazon anyị ga-enwe ọtụtụ narị akwụkwọ na-enweghị ọnụ.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.. Ọnụ ego ọ dị ugbu a bụ € 89.
Smart Ọkà okwu Bilie
Elekere smart a na elekere si Sistem Energy na ugbua ka anyị nyochaa ebe a, anyị nwere mmasị na ya nke ukwuu maka ihe ọ bụla ọ na-enye. Anyị nwere ngwaahịa nwere ntakịrị obere imewe yana a nnukwu ihu Ikanam ngosi, nke nwere akụkụ dị elu Qi technology maka wireless Nchaji anyị dakọtara na ngwaọrụ. Mana ihe anaghị akwụsị ebe ahụ ebe elekere mkpuchi a nwere Ndị na-ekwu okwu 2.0 na igwe okwu 2 maka ojiji nke Alexa (olu olu Amazon). A ka nwere ndị ọzọ, anyị nwekwara njikọ Bluetooth, wifi na teknụzụ dị ka airplay si Apple ikwado njikọ gị apple ngwaọrụ. Ngwaọrụ a bụ dakọtara na ma iOS na gam akporo.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon. Ọnụ ego ọ dị ugbu a bụ € 79.
Ihe ntaneti nke Amazon gosiri 5
Amazon toro nke ukwuu, oge ọ bụla ọ na-enye ọrụ ndị ka mma. Otu n'ime ndị kasị ewu ewu taa bụ Alexa, olu gị olu, na-esiwanye dakọtara na ụdị ngwaọrụ ọ bụla, site na telivishọn ruo smart bulbs ma ọ bụ oriọna. Iji jiri onye inyeaka a, anyị nwere ọtụtụ ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi, mana enwere otu nke na-adị iche na ndị ọzọ. Nke a bụ ikwughachi Gosi 5, ma e wezụga ịbụ ọkà okwu ọ nwere obere ihuenyo nke 5,5 nke ahụ ga-enyere anyị aka ile ọdịnaya ihe ọmụma, mee oku vidiyo ma ọ bụ lelee vidiyo YouTube ma ọ bụ Amazon Prime Video. Lee M hapuru gi a Análisis na anyị na-eme.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon. Ya ugbu a ere price bụ € 69,99.
3-in-1 caji ebe
Anyị nwere ọtụtụ karịa ngwaọrụ nwere batrị agbakwunyere na nke ahụ nwere akụkụ ya dị mma yana akụkụ ya dị njọ. Ihe dị mma bụ na anyị nwere ike ime na-enweghị batrị, ihe ọjọọ bụ na anyị ga-amata na ha nwere ụgwọ ka ha wee ghara ịdọkọ, ebe ụfọdụ ngwaọrụ nwere oke ikike kwụụrụ onwe ha. A isi odori anyị nwere ike kwụọ ụgwọ na ngwaọrụ 3 n'otu oge, ezubere iji ya ihe iPhone, ụfọdụ AirPods na Apple Watch kamakwa niile Qi na-akwụ ụgwọ ngwaọrụ dakọtara nwere ike ịgba ụgwọ. O nwere ike bụrụ ihe dị oke mkpa na tebụl akwa anyị.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon. Ọnụ ego ọ dị ugbu a bụ € 29,99.
NIX Advance digital foto etiti
Anyị niile nwere mmasị ịmebeghị oge dị mkpa nke ndụ anyị, icheta ha ma ọ bụ ịkekọrịta ha, ọ na-adịwanye obere ibipụta foto n'ihi na enwere ụlọ ọrụ raara onwe ha pere mpe, mana ugbu a enwere ụzọ dị iche iche iji nwee ọ orụ òkè nke foto ndị ahụ anyị wepụtara. Na nke a dijitalụ etiti anyị ga-enwe anyị foto na-agbanwe mgbe niile nanị site na ijikọ pendrive ma ọ bụ kaadi Sd nke nwere foto. E wezụga nke ahụ Ọ na-etinye elekere na kalenda ọrụ.
Ebe anyị nwere ike ịchọta ya n'ime Amazon. Ya ugbu a ere price bụ € 49,99.
Sonos Otu uzo
Sonos wetara anyị ngwaahịa ọzọ nke anyị na - enweghị ike ịkwụsị ịtụ aro, anyị na - ekwu maka Sonos One, otu n’ime kọdị na - adịkarị ala ma dịkwa ọnụ ala karịa mana nke bụ ọkachasị nke emegoro ha nnukwu aha. Anyị na-enweta ụda nke na-esighị naanị ike mana nke kachasị mma karịa 200 euro. Anyị nwere dị ka ọ bụla Sonos: airplay 2, Spotify Jikọọ na ya ngwa tinyere ike nke ya multiroom atụmatụ, ma ọtụtụ ndị ọzọ.
Zuta Sonos Otu
Anyị na-ekwu maka ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi, ya mere, nke a bụ Sonos One dakọtara na Apple HomeKit, yana Google Home yana Amazon Alexa. Ọ bụ otu n'ime smart audio ngwaahịa na nyere anyị ihe kasị mma sensations na-adịbeghị anya na anyị nwere ike ịkwụsị ịtụ aro ya ugbu a na ya price O sitere na euro 189 ma na nsụgharị ya ọcha na nke ojii ya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ị nweta ezigbo onyinye maka ekeresimesi a yana onye nwere ọgụgụ isi, n’enweghị obi abụọ onye a bụ Sonos enweghị oke n’usoro nke ikpo okwu (ezigbo enyi na iPhone yana ọkachasị na Alexa).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkà na ụzụ na-atụ aro iji nye na inepo .bọchị
Oscars 2020: Otu esi agbaso gala na nhoputa niile